तपाईं पनि बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ ! | ड्रूपल
सद्‌गुरु: आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्ने मानिसहरूले गौतम बुद्धलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन्, किनभने उनको उपस्थिति त्यस हदसम्म शक्तिशाली बनेको छ । आफ्नो जीवनकालमा, उनीसँग चालीस हजार भिक्षुहरू थिए, जसले बाहिर गएर आध्यात्मिक प्रक्रियाहरू फैलाए । उनले आफ्नो शान्तिपूर्ण तरिकाले संसारलाई सधैँको लागि परिवर्तन गरिदिए । यस धरतीमा आध्यात्मिक तरङ्गहरू ल्याउने बुद्ध–पुरुषहरूमध्ये गौतम बुद्ध एक हुन् । योग संस्कृतिमा बुद्ध पूर्णिमा सधैँ एक महत्त्वपूर्ण दिनको रूप्मा रहिआएको छ, साथै आध्यात्मिक जिज्ञासुको जीवनमा अत्यन्तै शुभ दिन मानिन्छ । गौतम बुद्धको स्मृतिमा हामीले यस दिनलाई उनको नामबाट राखेका हौँ । किनकि, २५०० वर्षभन्दा पनि पहिले यही पूर्णिमामा एक व्यक्ति (man) आफ्नो परम प्रकृतिमा प्रस्फुरित भएर जीव (being) बनेका थिए ।
जो आफ्नो बुद्धिबाट माथि उठेका हुन्छन्, जो आफ्नो मनको दास रहँदैनन्, उनी बुद्ध हुन् ।
योगको समग्र प्रक्रियाले मनबाट पर कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दछ । तपाईं मनबाट पर जानुभयो भनेमात्र, तपाईं आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा रहन सक्नुहुन्छ ।
तर, क्रम–विकासको प्रक्रिया नै यस्तो छ कि केही पलको लागि तपाईंले मनका प्रक्रियाहरूबाट छुटकारा पाए तापनि, तपाईं पुनः त्यसमै फर्किनुहुन्छ । त्यसैले, यदि तपाईं यी प्रक्रियाहरूबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं मनबाट पर जानुपर्ने हुन्छ । विकास प्रक्रियामा पछाडि फर्किने प्रश्न नै उठ्दैन । यदि तपाईंले कुनै रसायन (chemical) प्रयोग गरेर मनका प्रक्रियाहरूलाई शान्त गर्नुभयो भने, तपाईंले यो देख्नुहुनेछ कि त्यो रसायनको असर समाप्त भएपछि जीवनको प्रक्रिया अझ बढी निर्मम हुनेछ । यो सधैँ यस्तै हुन्छ । पीडा झन् प्रखर हुन्छ । तसर्थ, योगको समग्र प्रक्रियाले मनबाट पर कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दछ । तपाईं मनबाट पर जानुभयो भनेमात्र, तपाईं आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा रहन सक्नुहुन्छ ।
नवरात्रि— दोस्रो ३ दिन रजस प्रकृति
नवरात्रिको बिचका तीन दिनहरू अर्थात् चौथो, पाँचौँ र छैटौँ दिनहरू भौतिक खुसियाली प्राप्त गर्ने देवीहरूमा समर्पित हुन्छन्— जस्तै कि देवी लक्ष्मी । रजसको…
शिवका यति धेरै रूपहरू किन ? के प्रत्येक रूपको आफ्नो छुट्टै महत्त्व छ ? यो ब्लगमा हामी सद्‌गुरुमार्फत शिवका विभिन्न रूपहरूका बारेमा जान्नेछौँ । साथै, य…